Ukumba imigodi kwi-cryptocurrensets kunye neBitcoins kwilifu-Yenza umgodi wemali | Iindaba zeGajethi
UMiguel Gaton | | Imali engezantsi yedijithali, software, Te knoloji
Ukuba unomdla kuyo utyalomali kwii-cryptocurrencies kwaye awufuni kuchitha mali kuyo thenga iBitcoins, Ethereum okanye ezinye iimali ngokuthe ngqo, emva koko ukhetho olunokuba lunomdla kakhulu kukumba umgodi. Inkqubo ye- imigodi yemali yedijithali Yinkqubo eyabelweyo apho ukuthengiselana kuqinisekiswa khona kwi-blockchain; Kodwa ukuqonda ngcono ngendlela elula ukuba iqulathe ntoni, sinokuthi yinkqubo apho ikhomputha inikezela uthotho lwezixhobo zekhompyuter kwaye ekubuyiseleni ifumana intlawulo kwii-cryptocurrensets. Ukuba ufuna ukubona indlela yokwenza imigodi yemali ngendlela enenzuzo kwaye ukusuka efini, qhubeka ufunda eli nqaku.
1 Imigodi ye-idijithali yemali, intwana yembali
2 Imigodi yefu
3 HashFlare, i-bitcoins zam efini
4 Ungayifaka njani i-cryptocurrencies kwiHashflare?
Imigodi ye-idijithali yemali, intwana yembali
Kwiminyaka eyadlulayo yayinokwenzeka Imigodi yeBitcoins okanye ezinye iindlela zokugcina imali ngendlela elula evela ekhaya kunye notyalo mali lwezixhobo ezimbalwa kwinqanaba lezixhobo. Nawuphi na ikhompyuter wayenakho ukumba iimali zemali ngendlela enenzuzo kwaye ke abanye abantu bagqibe kwelokuba batyale imali koomatshini bokumba emakhaya ngendlela engaphezulu nangaphantsi. Okwangoku oku akusenakwenzeka, ukubonakala kwe- izixhobo eziyilelwe ngokukodwa imigodi yeemali kunye nobunzima obandayo be-algorithm yezimayini yenza ukuba kungabi nzuzo kwimigodi ngale ndlela namhlanje - ubuncinci kwiimali eziqhelekileyo ezifana neBitcoin, i-Ether, ... -kwaye imarike ilawulwa ziinkampani ezinkulu abazinikelayo izixhobo ezinkulu kulo msebenzi.
Kwaye asinasizathu sokumisela kuphela indleko zehardware, sikwaneminye imiqobo enje:
El ukwanda kobunzima: ubunzima bemigodi iBitcoins inyuka inyanga nenyanga, ngenxa yoko kuya kufuneka ukuba namandla amakhulu ekhompyuter ukuze ikwazi ukumba iBitcoins ngenzuzo.
El iindleko zamandla: iimali zemali zezemigodi yinkqubo etya umbane omninzi, ke iyinzuzo ngakumbi kulawo mazwe anombane onenzuzo enkulu, njenge China, Iceland, njl.
La lobushushu lokusingqongileyo: Iiprosesa zikhupha ubushushu obukhulu ngelixa uqhuba umgodi kwaye kufuneka sibuphelise obo bushushu; ke ngoko ukumbiwa kwemigodi kumazwe aneemozulu ezibandayo nako kunciphisa iindleko.
Ngenxa yezi zizathu-kunye nabanye-namhlanje indawo enkulu yemigodi ye-cryptocurrency yenziwa kumazwe afana ne China, Iceland, Finland, njl.
Njengoko sele sithethile, ukumbiwa kweemali zedijithali ngqo ekhaya akunangeniso ngoku. Ewe, enyanisweni, kunokuba yinzuzo nje ukuba sijonga ezo cryptocurrencies zisandula ukwenziwa ezingaziwayo kwaye ezisavumela ukumbiwa kwemigodi kwizixhobo ezincinci ezinamandla, kodwa yenye into endinokuyinika elinye inqaku elibanzi. Kule meko sithetha ngokumbiwa kwemigca ye-cryptos ephambili kwaye okwangoku ukusuka ekhaya akunakwenzeka.
Ke andinakuphinda ndenze imali ngokumbiwa kweBitcoins? Ewe impendulo ewe, enkosi kwinto eyaziwa njenge ukumbiwa kwelifu o kumbiwa kwefu. Uluvo kukuba iinkampani zisandula ukuvela eziseta iinkqubo ezinkulu zokumba imigodi kumazwe kunye nezixhobo ezizodwa, ezenza ukuba zibe nenzuzo, kwaye ezi nkampani zikunika ithuba lokuqesha iinkonzo zabo ukuze ube nowakho umgodi okude. Ngale ndlela unokuba nenkqubo yemigodi yeBitcoins kwaye kuya kufuneka uhlawule umrhumo kuphela, ukunqanda ukuphatha izixhobo ngokuthe ngqo.
Okwangoku kukho iinkampani ezininzi ezibonelela ngezi nkonzo kodwa kuya kufuneka ulumke xa ukhetha enye kuba kukho iimeko ezithile zeenkampani eziye zarhwaphiliza ezithi zilandele inkqubo yephiramidi ziye zaqhatha imali kubathengi bazo. Thina sicebisa uHashflare, eyinkampani esebenze kakuhle iminyaka embalwa ebonisa ukuba yinkampani ekuyo ungathemba kunye nokuba yintoni inzuzo ephezulu yokumbiwa kwemigodi yelifu Ukusuka kwimarike.
HashFlare, i-bitcoins zam efini
IHashFlare Yiyo inkqubo yemigodi yelifu ezibonelela ngenkqubo yemigodi ngezixhobo ezifakwe e-Iceland, ifumana inzuzo ephezulu ngenxa yendleko eziphantsi zamandla e-Iceland kunye nemozulu ebandayo ebavumela ukuba bagcine iindleko ezininzi xa kufikwa ekususeni ubushushu kwizixhobo zemigodi. Okwangoku bavumela ukumbiwa kwemigodi yeBitcoins, i-Ethereum, iLitecoins kunye neDash.
Ngaba uyafuna ukumbiwa kweBitcoins?
Cofa APHA kwimigodi yeBitcoins
Ungayifaka njani i-cryptocurrencies kwiHashflare?
Nangona kunokubonakala kunzima, iimali zemali zeHashflare zilula kakhulu. Kuya kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo:
1.- Cofa apha kwaye ubhalise kwiHashFlare
2.- Xa ungaphakathi kufuneka thenga inkqubo yezemigodi. Apha uneendlela ezininzi ezahlukeneyo zokumisa enye okanye enye i-imali yedatha. Ezinye zinenzuzo kunabanye, kodwa sicebisa ukuba wena thenga i-SHA-256 algorithm kunye neBitcoins yam.
3.- Khetha ubungakanani ufuna ukutyala ntoni kwiidola. Unokumba kwi-1,5 yeedola ukuya kumaxabiso aphezulu ayi-15.000. Apha kuxhomekeke kwimithombo nganye kunye nokuba ufuna ukutyala kangakanani kwimigodi.
4.- Yenza intlawulo. Ungahlawula ngeBitcoins kodwa ukuba ungumsebenzisi ongaphambili kwii-cryptocurrencies ungayenza ngokuthe ngqo ngeendlela ezingaphezulu zesiko ezinje ngokudlulisa ibhanki okanye ikhadi lekhredithi. Ukuba usebenzisa ikhadi lokuthenga ngetyala, kuya kufuneka uqinisekise intlawulo kamva ngokubonisa ikhowudi efakiweyo kwityala lakho ekhadini, kungathatha iintsuku ezimbalwa.
Kwaye kunjalo, ungaqala ukumbiwa kweBitcoins kunye fumana imali inyanga nenyanga ngaphandle kokwenza enye into.
Kwiphaneli yakho yeHashFlare unolwazi apho ungabona khona ingeniso eveliswa mihla leUqikelelo lwengeniso yosuku olu-1, iveki e-1, inyanga e-1, iinyanga ezi-6 kunye nonyaka omnye ukuze ubone ukuba luncedo kangakanani utyalo-mali lwakho.
Nje ukuba uqokelele i-Bitcoins kwiakhawunti yakho unga:
Zenzele ngokutsha ngokuzenzekelayo utshilo i-bitcoins ekuthengweni kwamandla angaphezulu kwemigodi eHashflare ukuze ukukhula kotyalo-mali lwakho kubonakale.
Dlulisa la maBitcoins kwisipaji sakho apho unokuzigcina khona okanye ziguqule kwi-euro okanye kwiidola kwaye ukusuka apho uwathathe uye ebhankini yakho.
Njengoko ubona, ukumbiwa kwemali kwimigodi evela kwilifu yinkqubo ethe ngqo. Enkosi kumaqonga anje ngeHashflare ungatyala kwi $ 1,5 kwaye uqale umgodi ngaphandle kokuthatha iingxaki ezinzima njengokuthenga izixhobo ezizodwa, ukuseta iinkqubo, ukufaka i-algorithm yezemigodi, ... konke oku kwenziwa yi-hashflare kuwe. Kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba uza kunikezela malini kutyalo-mali, uthenge amandla emigodi kwaye kunjalo. IHashFlare inoxanduva lokwenza inzuzo yakho ibe yeyona ilungileyo, ukuqala ukusebenza nabo uyikhumbule loo nto kufuneka ucofe apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Imigodi ye-idijithali yemali, fumana indlela yokwenza imigodi yemali kwilifu
Inqaku elingenaxanduva kakhulu. Uqikelelo olungenamveliso, nangaphezulu nge-cryptocurrensets opaque kwicandelo lezemali. Eyona ilungele iMafia kunabantu abanoxanduva.
Iindaba zeGajethi sitsho
Molo uJose Luis Ureña Alexiades. Ndiyaxolisa ukuba awulithandi eli nqaku, kuyinyani ukuba ii-cryptocurrensets zilutyalomali olunobungozi kwaye yindlela ekufuneka zithathiwe ngayo (kwezemigodi umngcipheko uphantsi kuba ngokucacileyo ukhona). Ewe asikholelwa ukuba yintengiso yemafia; Kungenzeka ukuba kukho imigulukudu echaphazelekayo kweli candelo ngenxa yokungazichazi kwayo kodwa ikwakhona necandelo elijikeleze ilizwe le-blockchain elenziwe ngabantu abaqhelekileyo. I-blockchain izakuqhuba inyathelo ukusuka "kwi-intanethi yolwazi" ukuya "kwixabiso le-intanethi" kwaye ukuba inokubakho iqinisekisiwe, kunokwenzeka ukuba sijamelene notshintsho oluguqula nje ngokufika i-Intanethi yayithetha. Imibuliso kunye nombulelo ngokusifunda
Phendula kwiGajethi yeendaba
Oorhulumente kunye neebhanki bacinga ngokufanayo, iirhafu kunye neekhomishini zihlala zikhona kwaye zikhona kwintengiselwano phakathi kwabo Iibhanki kunye noorhulumente ngasemva komxhasi webhanki ongaziyo okanye ongenayo ingcaciso yokuba kutheni behlawulisa iikhomishini ezininzi zokudlulisa phakathi kwemali. I-Cryptocurrency yenye indlela kwaye iya isanda kwaye umhlaba awunako ukuphuma kuyo.
UOmar Valfre sitsho
UJosé kufuneka afunde okungakumbi
Phendula uOmar Valfre
UOscar Lopez sitsho
Ke ezi nkampani, endaweni yokwemba ngokwazo kwaye zityebe, zikuthengisela umgodi ukuze ube nobutyebi? Ewe kunjalo, kunjalo. Oku kunje ngabo bakuthengisela iikhosi / iincwadi ukuze ube sisityebi sokutyala imali kwimarike yemasheya yeXD
Phendula uOscar López
Ewe, bayayimbumba idonki ngenyanga. Kwenzeka ntoni ukuba ukongeza kwimigodi bakunika ukuba uqeshise izixhobo zabo ukuze ube ngowakho.
Ndiyibona iyindlela yokwahlula-hlula ingeniso yabo, i-% yezimbiwa kunye nenye i-% yokuqeshisa izixhobo.
Ndinokuthandabuza malunga neqonga elingakhange licace kum kwinqaku. Ngaba ungandiphendula? Enkosi:
1.- Amandla owaqeshisayo, avelisa malini? Ngaba ungafumanisa ngaphambi kokuyithenga?
2.- Ngaba kunyanzelekile ukuba ube nesipaji esikwi-Intanethi okanye ngaphandle kweintanethi ukuze ukwazi ukurhoxisa ii-bitcoins zakho?
3.- Yintoni ekucetyiswa ngakumbi, ngaphandle kweintanethi okanye kwi-Intanethi?
Enkosi kunye noAntonio
1.- Kwiphaneli yeHashflare uqobo ikuvumela ukuba ulinganise into oyivelisayo ngemini ngamandla ngamnye ekunikwe ikhontrakthi kuwo.
2.- Ewe, kufuneka ube nesipaji se-bitcoin ukurhoxisa oko kuvelisiweyo. Ukuba ungowam u-Ether uya kudinga isipaji se-Ether.
Kwinqanaba lokhuseleko, ngaphandle kweintanethi kukhuseleke kakhulu kodwa kunzima nangakumbi ukuphatha. Ekugqibeleni, ndingagqiba enye okanye enye ngokusekwe kutyalo-mali lwakho. Ukuba uza kwenza utyalo-mali olusezantsi ke ndicinga ukuba eyomzimba ayikufanelanga, ukuba uza kutyala imali kakhulu ewe.
Enkosi ngokuphendula uMiguel.
Molo, ndifunde nje inqaku lakho malunga nokumbiwa kwemigodi ye-cryptocurrency kwilifu kunye neHashFlare kwaye ndithenge i-SHA-256 algorithm kunye ne-Bitcoins yam de kube kucace ukuba yintoni engacacanga yile $ 1,50 yile endinayo ehlawula yonke imihla okanye ngonyaka ukuba Ndiyayithenga. Ndiyabulela kakhulu joseph